Global Voices teny Malagasy » Ny ‘Revirevin’i Shina’ Ve Tena ‘Revirevy Miaramila Matanjaka’ Tokoa ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Marsa 2013 3:40 GMT 1	 · Mpanoratra Tea Leaf Nation Nandika Andriamifidisoa Zo
Nivoaka voalohany tao amin'ny Tea Leaf Nation  tamin'ny 8 marsa 2013 ity lahatsoratr'i Rachel Wang ity ary navoaka indray noho ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Tamin'ny 3 marsa, nisy lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe “Mifantoka sy manangana ny ‘Revirevy Tafika Matanjaka’ ” nivoaka teo amin'ny voalohan-takelaky ny gazety mivoaka isan'andro PLA  gazety mivoaka isan'andro PLA. Raha atao indray mitopy maso voalohany ny lahatsoratra dia mitovy amin'ny taratasim-propagandy, famoaka mandritra ny fivorian'ny kongresy shinoa indroa misesy. Ny lahatsoratra dia ahitana teny filamatra tahaka ny, “Ny fankatoavana ny Antoko no fanahin'ny tafika matanjaka,” sy ny “Ny fiasana mafy sy fiasana mafy no marika goavan'ny asa miorina tsara.” Amin'ny dingana lalina kokoa, anefa, dia mety ho lahatsoratra politika mampiako ny tetibolam-pirenena, izay tombanana ho 720,2 miliara yuan ($114,3 miliara) ny ho an'ny tafika amin'ny 2013, izay manondro  fiakarana 10,7%.
Saina Shinoa avy amin'ny mpisera Flickr Herr_Bert (CC: AT-NC-SA)
Mety misy fiantraikany bebe kokoa ny “Strong Military Dream” (Revirevy tafika matanjaka) – Mety mampiseho ny nofinofin'i Shina io . Ny andro manaraka ny nivoahan'ny lahatsortra tao amin'ny gazety mivoaka isan'andro PLA, nisy lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe “Miaramila matanjaka no revirevin'i Shina; Tsy maintsy manana Miaramila Matanjaka ny firenena Lehibe iray” nivoaka tamin'ny habaka mitondra anarana goavana, ahitana ny huanqiu.com , famoahan'ny Global Times amin'ny teny shinoa. Nasongadin'ny lahatsoratra fa “tsy ‘revirevin'ny mpanankarena’ ny ‘Revirevin'i Shina’” sy ny, “Eo amin'ny sehatra politika, tsy mitovy amin'ny firenena matanjaka ny firenena manankarena.” Ny kinendrin'ny lahatsoratra voalohany dia ny hoe ny revirevin'i Shina dia izay revirevin”ny Firenena Matanjaka – sy miaramila matanjaka.
Nanodidina ny fotoana nivoahan'ireo lahatsoratra ireo ny CCTV amin'ny teny anglisy mandeha ao anatin'ny 24 ora no manentana ny adi-hevitra  momba izany ao amin'ny [zh] Weibo:
#CHINA DREAM# ‘Nanonofy aho!’ Tsy mbola nisy fotoana teo amin'ny tantara ka niteny an-kahalalahana ny fanantenany, ny revireviny ary ny fomba fijeriny ny hoaviny tsaratsara kokoa ny Shinoa. An-tapitrisany ny ao Shina no mamelombelona ny revirevin'i Shina ao aminy, raha an-tapitrisany ny olona ivelan'i Shina no valalanina amin'ny fiainana ao. Zarao amin'izao tontolo izao ny Revirevin'i Shina ao aminao ary omeo aingam-panahy ny hafa!
Nisy sarimihetsika fohy nampitondraina ny lohateny hoe “Revirevin'i Shina,” izay notontosain'olo-tsotra ihany koa novokarina. Raha miezaka fatratra ny fampahalalam-baovaom-panjakana ny manao hivoahan'ny fiteny manatsara zavatra tahaka ny hoe, “Tiako ny firenentsika ho be herimpo, sy hanana vina, sy fahendrena handreseny ny sarotra,” dia asehon'ny filazan-kevitra amin'ny ankapobeny tamin'ilay sarimihetsika sy ny resaka momba ny Revirevin'i Shina amin'ny ankapobeny fa tsy mety hirotsaka an-tsehatra ho ao ny mpiserasera amin'ny ankapobeny. Lasa ny esoeso, hisitrisitra ary fitarainana aza no betsaka. Mpisera Weibo iray mitazona ny @Paradise Bird 128 (天堂鸟128) [vorona paradisa 128] no manoratra  [zh]:
Ny revireviko dia ny tsy hanasana ahy ‘hisotro dite’ [tenin-jatovo enti-milaza ny fampiantsoana hihaona amin'ny tompon'andraiki-panjakana] rehefa miresaka lohahevitra momba an'i Shina amin'izao vaninandro iainana izao.
Milaza ny heviny  [zh] ny iray hafa antsoina hoe @If Milk Tea (如果奶茶) [Raha Ronono Dite] ,
Araka ny fahalalàna kely dia kely ananako amin'ny tantaram-pirenena vahiny, raha misy revirevy lazaina amin'ny firenena iray, dia tsy maintsy miaraka amin'ny fifindra-monin'olona maro izany, tahaka izay tamin'ny nitranga tamin'ny Revirevy Amerikana. Afa-manamarina izany isika amin'ity Fivorian'ny Solontena indroa misesy ity, izay miantso antsika hiaro sy hahatsara ny Nofinofin'i Shina, ary manontany hoe firy amin'izy ireo na ny olo-pantany no nahatratra ny Revirevy Amerikana.
Manararaotra ihany koa ny mpandeha aterineto hiresaka momba ny fifanipahana hita ao amin'ny tian'ny fanjakana hisongadina amin'ny “Revirevin'i Shina” sy ny fanantenany tsy tanteraka. Nanoratra  [zh] ny mpisera @Zhou Yiting (周旖婷),
Rivotra madio kokoa, rano ara-pahasalamana kokoa, sakafo voaaro kokoa, fomba tsara kokoa hiarovana ny zaza, sidina ara-potoana, lalana tsy voasakatsakana, vidin'etona mora kokoa, hetra ambanimbany kokoa…tsy betsaka, fa kely fotsiny…Manonofy aho, nofy fotsiny.
Manana ny revireviny ny fampahalalam-baovaom-panjakana, fa tsy afa-mamaritra azy mazava. Araka ny lahatsoratra iray, ny fanatontosana ny Revirevin'i Shina dia “manaraka tsy azo hozongozonina ny lalan'ny sosialisma manana ny toetra shinoa, fanatontosana ny fampandrosoam-pirenena sy ny fivoarana sosialista amim-pilaminana sy fomba sivilize.” Mpisera Weibo @Ji Jiaqing (籍佳婧JJJ) nahatsapa  fa teny filamatra poak'aty indray izany:
Nahoana aho no mahatsapa fa tahaka ny mitsena rivotra ihany ilay teny filamatra vaovao malazan'ny ‘Revirevin'i Shina’ faraparany teo, noho ilay izy nalaina tahaka tamin'ny ‘Revirevy Amerikana’ ve ? Eny fa na izaho aza tsy mahazaka ny Antoko amin'izao fotoana izao.
Ny fandraisana mangatsiatsiaka amin'ny “Revirevin'i Shina” any amin'ny mpihaino nokinendry no mampiseho ny fahadisoam-panantenana amin'ny tsy fahafahan'ny governemanta manatanteraka ny nofinofy. Mila fametrahan-dalàna na fidirana an-tsehatra vaovaon'ny mpitondra ny ankamaroan'ireo nofinofy ireo. Hoy  ny mpisera Weibo @Yu Jianrong (于建嵘), Mpikaroka iray avy ao amin'ny Akademia Shinoa misahana ny Siansa Sosialy izay manana mpanaraka mihoatra ny iray tapitrisa ao amin'ny Weibo [zh]:
Mampiseho ny revirevin'ny Amerikana tsirairay ny ‘Revirevy Amerikana’ , ary mifototra amin'ny fiarovana ny zon'ny tsirairay; mampiseho ny revirevin'ny firenena kosa ny ‘Revirevin'i Shina’, izay mifototra amin'ny fanamafisana kokoa indray ny herin'ny fitondram-panjakana.
Ny fahasarotan'ny fiainana (zavamisy iainana) sy ny tsy fisian'ny fahazotoana no mety ho antony roa mahasarotra ny famaritana ny “Revirevin'i Shina.” Angamba ny tonian'ny gazety mivoaka isan'andro Henan Business Daily  no afa-mametraka azy tsara kokoa:
Eto Shina Tanibe, ho an'ny mpanankarena sy ny manana fahefana, ny revirevy lehibe indrindra dia ny ‘Revirevy Amerikana,’ raha ny revirevy kely indrindra dia ny ‘Revirevy Hong Kong.’ Ho an'ny olona tsy manam-bola sy fahefana kosa, na dia ny famerenana ny rononon-jazakely aza dia revirevy efa mety.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/14/46715/
 Tea Leaf Nation: http://www.tealeafnation.com/2013/03/is-the-china-dream-really-a-strong-military-dream/
 gazety mivoaka isan'andro PLA: http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2013-03/03/content_29058.htm
 no manoratra: http://www.weibo.com/1932039077/zmevpjdzM
 Milaza ny heviny: http://weibo.com/1890616675/zlUZOnrY0
 tonian'ny gazety mivoaka isan'andro Henan Business Daily: http://www.weibo.com/1650342405/zmjmq3aiz